Ambongadiny boribory boribory kristaly chandelier kanto Chandelier PC306 Mpanamboatra sy mpamatsy | Langsheng
Chandelier kanto boribory boribory chandelier Chandelier PC306
Fitaovana: Fitaovana + vy tsy misy fangarony + vera + chip misy fitaovana
Loko: volamena + chrome + cyan
Size: savaivony 55/70 / 100cm
Fomba fanodinana: fanapahana sy elektrika
Loharano hazavana: Loharano hazavana LED
Fanamboarana: tohano ny habe sy ny loko hafa
Ampivoary ny atitany misy anao miaraka amin'ny Verbier L Chandelier, zava-nisongadina izay azo ampidirina amin'ny fomba fanaka maoderina na mahazatra. Ity jiro pendant mitambatra ity miaraka amin'ny famaranana nikela sy haingon-trano fitaratra mazava dia tsy vitan'ny fanatanterahana ny fanazavana ny efitrano, fa asa kanto ihany koa. Apetraho eo ambonin'ny latabatra fisakafoanana na eo afovoan'ny efitrano rehetra izy io raha te ho vita tsara tarehy tokoa.
Ny famonosana Floret fitoeran-jiro valo dia tsy mihoatra ny manome hazavana fotsiny fa manamboatra fanambarana matotra. Bara varahina satin tsara tarehy mametaka ny valin-drihana amin'ny valindrihana ary midina izy hanohana ny sampahon'ny sandry malefaka sy mahitsy izay mamony avy eo afovoany. Ny lantom-pasana mazava dia manaingo ny faran'ny sandry, mamorona endrika mampahatsiahy ny dandelion fotsy randy ny voany mba hitsoka sy handihizana amin'ny rivotra. Ity lalao mampihetsi-po iray tokana ity dia mety ho an'ny herinaratra antitra, indostrialy an-tanàn-dehibe, rendrarendra, na atitany maoderina.
Manjelanjelatra sy marevaka, ity chandelier maoderina manaitra ity dia azo antoka fa hanao fanambarana amin'ny toerana onenanao. Raha raisina amin'ny silhouette boribory dia manome alokaloka amponga izy io. Ny faribolana volamena jeometrika dia voasokitra amin'ny alàlan'ny kristaly mazava, ny famaranana volamena antitra ary ny jiro miisa 3 (tsy tafiditra) ao anatiny izay manatsara ny habakabaka amin'ny habaka tadiavinao. Ny famaranana metaly sy ny lantom-peon-jiro mazava dia mahatonga ity chandelier art deco ity miaraka amin'ny sophistication tsara tarehy tonga lafatra amin'ny fanavaozana ny efitranonao, ny efitrano fandraisam-bahiny, ny lakozia ary ny foyer.
Fomba maoderina: ny famerenana amin'ny laoniny ny hazavana, ny vatan'ny kristaly ary ny mavitrika dia manintona ny fisarika ny filalaovana mahazatra sy nentim-paharazana. Ny hatsaran-tarehy maoderina ateraky ny famolavolana madio sy ny firavaka volamena no tena tonon-kira
Estetika fanaovana amponga miaraka amina Crystal Design: Miakanjo kristaly kanto, ity chandelier volamena mainty ity dia manana vatosoa toy ny amponga misy vatosoa mangarahara. Ny tsipika tsy ara-dalàna vita amin'ny faribolana vy mifandraika amin'ny tsaramaso volamena dia manome fahatsapana mahazatra
Rojo mihantona azo ovaina: ity jiro volamena ity dia misy rojo azo zakaina 59 in ho an'ny haavo mihantona azo ovaina amin'ny 11 ka hatramin'ny 67 in mifototra amin'ny filanao
Valintary isan-karazany azo ampifanarahana amin'ny valindrihana: ny chandelier volamena varahina misy lantom-peony dia azo ovaina amin'ny valindrihana fisaka, mitongilana ary misy valopy
Jiro mihantona tsy miova: ity hazavana mihantona kristaly ity dia mety tsy ho simba tanteraka miaraka amina switch dimmer mifanaraka (amidy misaraka) mba hamoronana atmosfera tonga lafatra ho an'ny habakao manokana
Fametrahana mora: ny jiro volamena mihantona dia mirakitra torolàlana amin'ny antsipiriany sy fitaovana fampitaovana ho an'ny fametrahana mora sy haingana
Faharetana: Ny fananganana metaly mafy ny jiro maoderina dia miantoka ny tanjaka sy ny faharetana
Crystal Chandelier Dimensions: 15 in W x 15 in. D x 7 in. H; Dimy manodidina ny lamosina: 4.7 in. W x 1 in H. Ny jiro kristaly manana habe mifanaraka aminy dia mety amin'ny ankamaroan'ny toerana mamorona hatsaran-tarehy tsy manam-petra na mihantona amin'ny trano fisakafoanana, galeria, nosy an-dakozia, efitrano fatoriana, vavahady, lalantsara na toerana hafa.
Takian'ny takamoa: Ity hazavana mihantona ankehitriny ity dia mampiasa jiro 3 x E12 ambony indrindra 40-Watt (tsy tafiditra); Mifanaraka amin'ny takamoa LED manjelanjelatra na mitovy. Ny labozia Candelabra dia ampirisihina mafy hamenoana ny fiotazam-boaloboka (tsy tafiditra)
Teo aloha: Chandelier PC-8255 Glass vera chandelier toetra tsotra chandelier tsotra chandelier
Manaraka: Chandelier pc-8233 toetra vy jiro injeniera jiro injeniera vaovao Chandelier
Teknolojia vaovao fanaovan-jiro jiro metaly vaovao ...
Chandelier 33763Crystal labozia fomba tsotra hig ...
Chandelier PC-8293 Crystal hazavana mihaja zavakanto cha ...
Chandelier 33501 Crystal tsotra lapa kanto ...